Kismaayo News » Shacabka Caasimadda nabad ma rabaan?
Shacabka Caasimadda nabad ma rabaan?
Kn: Inta aanan u guda galin jawaabta su’aashan oo aan rabo in aan la wadaago aqristayaasha sharafta leh, bal marka hore aan is weydiino yaa ku nool caasimadda dalka ee Xamar?.
Waxaa ku wada nool oo iska warqaba qolooyin kala taabacsan Alshabaab, Ahlasunna, haraagii Midowga Maxkamadaha, dhiigmiirato isugu jirta ganacsato iyo Hay’adaha Samafalka ee aan Dowliga aheyn (NGO’s) iyo koox loogu yeero Qaswadayaal ku fashilmay kuna hungoobay siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantood waxay ka siman yihiin oo heshiis ku yihiin in aysan Xamar ka dhalan dowlad Soomaaliyeed oo cagaheeda ku istaagta una horseeda dhammaan Umadda Soomaaliyeed nabad iyo horumar.
Tan kale dowladdan hadda jirta oo haysata aqoonsi caalami ah waxay ku waalatay sidii kuwii ka horeeyay safaro dibedda ah iyo heshiisyo caalami ah oo aan wax dan ah hadda ugu jirin umadda taasoo macnaheedu tahay in ay gabtay siyaasaddii gudaha iyo xalinta khilaafaadka arrimaha gudaha maxaa yeelay nin gurigiisa hagaajista ayaa tu kale ku dara waxaa la yiraa haan gudaha ka qurunsan, dhalaalkeeda kore waxba tari ma hayo.
Haddaba waa xagee halka bahashu iska qaban la’dahay ama sartu ka qurunsan tahay?. Soomaali waxay tiraa “ run iyo ilko waa la cadeeyaa”. Inkastoo Xamar tahay caasimaddii Soomaaliyeed, umadda oo dhana u dhaxeyso, haddana sida degaanada loogu kala badan yahay “BEEL” is xijiya sidaas darteed “BEESHAASI” waxaa looga baahan yahay oo laga dhowrayaa maadaama ay yihiin qabiilka ugu badan Xamar iyo hareeraheeda, madaxweynihii umaddana ka dhashay in ay u balanqaadaan walaalahooda kale ee Soomaaliyeed in ay marti galin karaan oo ay ku noolaan karaan si xor ah oo aan cabsi lahayn maxaa yeelay xaqiiqdu waxay tahay dowlad ma sugi karto amniga haddii dadka degaanku aysan la shaqeynayn waana halkaas meesha arrintu ka qurunsan tahay.
Arrintu si kastaba ha ahaatee, dowladu waa in ay garataa asalka iyo meesha dhibka ka jiro, abuurtaana jawi ay si wadajir ah ula shaqeyn karto shacabka gaar ahaan dhalinyarada ee aan loo arag cadow.
Sidoo kale caalamka iyo soomaalida inteeda kale waxay isha ku hayaan “BEESHA” maadaama ay degaan ahaan nasiib u yeeshiin caasimaddii dalka sida ay nabada u raadiyaan, una unkaan dowlad xoog leh oo wadankoo dhan hanata. Ugu dambeyntii soomaali waxay tiraa “ far kaliya fool ma dhaqdo” “BEESHA” kaliya mas’uuliyada ma saarno, waa in qof walba oo soomaali ah meel kasta oo uu joogo xil isa saaraa kana qeybqaataa dib u dhiska wadanka.